सम्बन्धका बारेमा कति बुझ्नुहुन्छ ? - परिक्षण - नारी
सम्बन्धका बारेमा कति बुझ्नुहुन्छ ?
'सम्बन्ध’ शब्दले आफैंमा धेरै कुरा बताउँछ, कारण सम्बन्धको डोरीले नै मानव जीवन अघि बढ्छ। सम्बन्ध शब्द नहुँदो हो त सम्भवतः जीवन निरस हुने थियो। न कोही आफ्नो हुन्थ्यो, न त आफू कसैको रहनुहुन्थ्यो। यद्यपि स्थिति त्यस्तो छैन, व्यक्ति एउटा नभई अनेकौं सम्बन्धमा बाँधिन्छ, जसले उसको जीवनलाई गतिमान मात्र राख्दैन, त्यसलाई सुचारु ढंगले चलाएर समय-समयमा सुख-दुःखमा उसको सहारा बन्छ। यी सबका लागि सम्बन्धमा समझदारी हुनुपर्छ र सम्बन्धलाई बुझ्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ।
के 'सम्बन्ध’ शब्दलाई जान्नु, बुझ्नुहुन्छ। तपाईंलाई लाग्छ कि जीवन बिताउनका लागि सम्बन्ध अत्यावश्यक छ ?
(क) हो (ख) सायद (ग) होइन।
सम्बन्ध निर्वाह गर्दा कुन-कुन सम्बन्धलाई कति महत्व र स्पेस दिनु जरुरी छ, कुन-कुन सम्बन्ध तपाईंको जीवनका लागि विशेष र महत्त्वपूर्ण छ ध्यान पुर्‍याउनुहुन्छ ?
कसैले आफूलाई मन पराउँदैन र आफूसित सम्बन्ध पनि राख्न चाहँदैन भने उसका पछाडि भाग्नुहुन्न र त्यो सम्बन्धलाई शान्तिपूर्वक विश्राम दिनुहुन्छ ?
आफ्ना आमाबुबा र सासू-ससुरालाई समान रूपले सम्मान गर्नुहुन्छ, तपाईंको नजरमा दुवै समान छन्। दुवैसँगको सम्बन्धमा तपाईंको जीवनले केही न केही प्राप्त गर्छ ?
आफ्ना श्रीमान्लाई जीवनमा अहम् स्थान दिनुहुन्छ, कारण मातापितालाई जन्मको साथी र श्रीमान्लाई कर्मको साथी मान्नुहुन्छ, जसका साथमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताउनु छ ?
सन्तान तपाईंका लागि अत्यन्त जरुरी छन्। तपाईं तिनका लागि जे पनि गर्नुहुन्छ। आफ्ना सन्तानले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरी सधैं स्वस्थ र सुखी भएको देख्न चाहनुहुन्छ ?
परिवारका हरेक सदस्यका लागि केही न केही गर्न चाहनुहुन्छ। आफ्नो माइती र श्रीमान्को घरमा सबैजना सधैं सुखी र स्वस्थ रहून् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ ?
देश एवं समाजप्रतिको आफ्नो कर्तव्य बुझ्नुहुन्छ। आफ्नो देश एवं समाजका लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ ?
आफूप्रति पूर्ण उत्साह राख्नुहुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, रुचि एवं सपनाहरूप्रति सजग रहनुहुन्छ। समय-समयमा ती कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ आफ्नो रहर पूरा पनि गर्नुहुन्छ ?
बढी उत्तर 'ए’ छ भने तपाईंलाई सम्बन्धका बारेमा पूर्ण ज्ञान छ। तपाईं त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ र राम्रोसँग निर्वाह गर्नुहुन्छ। तपाईं बुद्धिमान् हुनुहुन्छ।
उत्तरमा 'बी’ बढी छ भने तपाईंलाई सम्बन्धका बारेमा पूर्ण ज्ञान त छ तर तिनलाई निर्वाह गर्न चुक्नुहुन्छ।
बढी उत्तर 'सी’ छ भने तपाईं सम्बन्ध शब्दको अर्थ बुझ्नुहुन्न अनि अव्यावहारिक पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो व्यवहारको पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र जिम्मेवार बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
चैत्र २, २०७० - तपाईंमा कति शिष्टता छ ?